Akhriso Faahfaahin Laga Helayo Weerarka Kontroolka Saybiyaano Ee Muqdisho. – Calamada.com
Akhriso Faahfaahin Laga Helayo Weerarka Kontroolka Saybiyaano Ee Muqdisho.
Maanta waxey ciidamada Shabaabul Mujaahidiinta Howlgal ka fuliyeen gudaha Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa weerar toos ah ku qaaday Bar kontrool oo ku yaala isgoyska Saybiyaano ee degmada Hodan, Halkaasi oo ay ku sugnaayeen Askarta kooxda Ridada Somalia.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa gabi ahaan Xasmiyay oo Cagta mariyay Kontroolka waxeyna sidoo kale gabi ahaan laayeen oo goobta ay ku wada dileen ciidamadii Murtadiinta ee Barta Kontrool ku sugnaay.
Intaasi kadib ciidamo gurmad ah oo ah kuwa Dowladda Ridada Somalia ayaa goobta soo gaaray waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo dhex maray ciidamada Mujaahidiinta iyo kuwa Murtadiinta ee gurmadka ahaa.
Dagaalkan ayaa sidoo kale khasaara culus lagu gaarsiiyay maleeshiyaatkii Murtadiinta ee gurmadka ahaa.
Inta la xaqiijiyay howlgalkaan waxaa lagu dilay ugu yaraan (9) Sagaal ka tirsan Murtadiinta, Waxaa kuwa la dilay ku jira nin magaciisa lagu soo koobay Geedi oo ah taliyihii heystay Kontroolka Weerarka Tooska ah lagu qaaday ee ku yaala Saybiyaano.
Sidoo kale Howlgalkan waxey Mujaahidiinta ku dhaawaceen 25 ka tirsan Murtadiinta waxaana ku jira Murtad magaciisa lagu soo gaabiyay Yaasiin Ganaeey oo ah taliye ku xigeenka Saldhiga Bartamaha oo ah saldhig looga taliyo Afar degmo oo ka tirsan Wilaayada Banaadir dhaawiciisana waa mid garaab ah.
Ciidamada Mujaahidiinta ee fuliyay Howlgalkan Barakeysan ayaa si nabadgalyo ah kusoo laabtay, waxeyna Saraakiisha Mujaahidiinta xaqiijiyeen in howlgalkaasi ay ku Shihiideen Labo Walaal, Allaah Shahaadadooda haka Aqbalo kuna Cazuuma Jannatul Firdowsa.
Previous: Camaliyad Istish-haadiyo Ah Oo Ka Dhacday Bartamaha Dalka Afghanistan.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 06-11-1440 Hijri.